မင်းရဲကျော်စွာ: August 2009
စောလူးမင်းဆိုလို့ သမိုင်းထဲကလို့မထင်နဲ့ဦး အုတ်ကျင်းနားက... အဲလေ...
လက်ရှိ မြန်မာပြည်က စောလူးမင်းပါ။
မနေ့ည ၉ နာရီခွဲလောက်မှာ မြန်မာပြည်သား စောလူးမင်းနဲ့ ထိုင်းလက်ဝှေ့သမား တယောက်တို့ ထိုးသတ်ကြတာ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ ပြီး သွားတယ် ။
ပွဲစလို့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်း ထိုးလိုက်တာနဲ့ စောလူးမင်းက ထိုင်းလက်ဝှေ့သမားကို အလွန့် အကျွန် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။
မြန်မာပြည်သားတွေ အားပေးလိုက်ကြတာ မြူးလို့ပျော်လို့
စိတ္တဇဆေးရုံတွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီးက လူနာများအား ပြောကြားသည်မှာ...
" မနက်ဖြန် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ဆေးရုံမှာ လာဟောပြောမယ်
သူဟောပြောပြီးလုိ့ ငါချောင်းဟန့်တာနဲ့ အားလုံး လုပ်ခုပ်တီးကြပါ။ ဒါဆို မင်းတို့ကို ကြက်သားဟင်းနဲ့
ဟောပြောသောနေ့သို့ ရောက်သော် အဆင်ပြေစွာ ဟောပြော ပြီးဆုံးသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက လွန်စွာ ကျေနပ်လေ၏။ ထိုအခါ ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ချောင်းဟန့်လိုက်၏ ထင်ထားသည့် အတိုင်း အားလုံးက ၀မ်းမြောက်စွာ လက်ခုပ် တီးကြလေသည်။
သို့သော်မထင်မှတ်သော အဖြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားသည်။ ထိုသည်ကား
လူနာတစ်ယောက်သည် ရုတ်တရက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အား ပါးချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အားလုံး မင်တတ်နေစဉ်
" အရူး..မင်းကလက်ခုပ်တီးရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား ကြက်သားဟင်း မစားချင်ဘူးလား။ "
၁၅ နှစ် ၂၀ အကြား ဘောလုံး ၂၂ ယောက် ၀ိုင်းလုသည်။
၂၀ နှစ် ၂၅ အကြား ဘတ်စကတ်ဘော ၁၂ ယောက်ဝိုင်းလုသည်။
၂၅ နှစ် ၃၀ အကြား စားပွဲတင် တင်းနစ် ၂ ယောက်သာကျန်သည် ဟိုဖက်ပုတ်ထုတ် ဒီဖက်ပုတ်ထုတ်။
၃၀ ထက် အလွန် ဂေါက်သီး ဝေးသထက်ဝေးအောင် ရိုက်ထုတ်ကြသည်။
စားသောက်နေတုန်း ယင်ကောင် တစ်ကောင်က စားပွဲဝိုင်းပေါ် ဖြတ်ပျံသွားသည်။
ဆာမူရိုင်: တစ်ရောက်က သူ့ဓါး ကို ဖျတ်ခနဲ ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင် ကိုခုတ်ချလိုက်သည်။
ယင်ကောင် ၂ ပိုင်းပြတ်ပြီး ကျလာသည် ။ ဆိုင်ထဲက လူတွေအားလုံး အံ့အား သင့်ကုန်သည်။
(ဆာမူရိုင်း ဆိုတာမျိုးက ဓါးခုတ် အင်မတန်မြန် သကိုး ။ )
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ယင်ကောင် နောက်တစ်ကောင်က ပျံ လာပြန်သည် ။ ဒုတိယ ဆာမူရိုင်: ကလည်း အားကျမခံ ဓါးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ယင်ကောင်ကို ခုတ်ချလိုက်သည်။ ယင်ကောင် ၄ ပိုင်းပြတ်ြပီး ကျလာသည် ။ လူတွေလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်ကုန်သည်။
ခဏကြာတော့ ကံဆိုးသူ နောက်ထက် ယင် တစ်ကောင် ပျံသန်းလာပြန်သည်။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း
တတိယ ဆာမူရိုင်း ဘာလုပ်ပြဦးမလဲ ဆိုတာ အင်မတန်စိတ် ဝင်စားနေကြပြီ။ တတိယ ဆာမူရိုင်း က သူ့ ဓါးကို ဖျတ်ဆို ဆွဲထုတ် ပြီး ဓါးအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ ( မြန်လွန်းလို့ ခုတ်လိုက်တာတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး ။)
လူတွေလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ယင်ကောင် ကိုလိုက်ကြည်တော့ ကိုရွှေယင်ကောင်က ဟန်မပျက် ဆက်ပျံ နေသည်။ လူတွေက စိတ်ဓာတ်ကျသွားသည် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တတိယ ဆာမူရိုင်း ပြောလိုက်သည့် စကားကြောင့် ပရိတ်သတ် ကြီး ဘာပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်ကုန်ကြသည် ။
“ ဒီကောင် ပျံ တာတော့ ပျံ နိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီတသက်တော့ ကလေးအဖေ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး..။
Inarestaurant,aman ordered soup but, as soon as it arrived, he had to go to the bathroom.
To make sure that nobody touched his soup while he is away, he wrote onanapkin:
"I SPIT IN THE SOUP".
When he returned, he found another message on napkin: